Posted by : Bugyi Monday, January 16, 2012
myanmar3unicode install လုပ်နည်း.....
ကျွန်တော်ကြားရသလောက်သတင်းကတော့ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက ကျွန်တော့်တို့ရဲ့ ကိုဇော်ဂျီ ကိုအမြစ်ဖြတ်ပြီး Myanmar3Unicode ကိုအသုံးပြုတော့မယ်လိြု့...
ဆရာဦးဇော်လင်း ရေးသော ကွန်ပျူတာအကြောင်းအသေးစိတ် (မြန်မာ)
စာရေးသူ :>> ဆရာဦးဇော်လင်း (Youth Computer) စာအုပ်အမည် :>> ကွန်ပျူတာအကြောင်း အသေးစိတ်သိစရာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပါ .. ကွန်ပျူတာအြေ...
ကွန်ပျူတာပြသနာ ဖြေရှင်း (မြန်မာ)
ဆောင်း စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကို ဝေမျှပေးချင် ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးက ကွန်ပျူတာ သမားတိုင်း မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့ကြုံရတဲ့ ပြဿနာ များကို ဖြေရှင်းထားပေး...
WINDOWS ( 7/XP ) မှာ Desktop Icon and Folder တွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်မပေါ်ရင်
ရံဖန်ရံခါမှာ Restore လုပ်မိတဲ့အခါတို့ Theme ပြောင်းမိတဲ့အခါတို့မှာ Desktop Icon and Folder တွေမှာ ဇော်ဂျီဖောင့်မပေါ်တော့တာမျိုးတွေဖြစ်တက်ပါတ...
Window7Version အနိမ့်ကနေအမြင့် UpGrade လုပ်နည်း
" window starter ကနေ window7ကိုပြောင်းချင်ရင်တော့ ပြောင်းလို့ရပါတယ်. ဘာတွေကို ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲ ဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံး ပြောင်းလို့ရတ...
သင့်ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးလေး ဖန်တည်းကြစို့လား
Designer စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိတ်ဆွေများ အတွက် စိတ်ကူးမိတာနဲ့ Tools လေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Designer တစ်ယောက် ဖြစ်မှာ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးယဉ်မှူ...
WiFi လွှင့်နည်း အဆင့်ဆင့်
အိမ်တွင်း၊ ရုံးတွင်းအတွက် Wi-Fi လွှင့်ဖို့ဆိုရင်တော့ Wireless Router (သို့မဟုတ်) Access Point ကို အသုံးပြုပြီး လွှင့်နိုင်ပါတယ်။ Wi-Fi ကို ...
မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ
မြန်မာ မှ အင်္ဂလိပ် သို့ အင်္ဂလိပ် မှ မြန်မာသို့ ဘာသာပြန်ဆော့လေးပါ ကျွန်တော်လိုချင်နေတာတော့ ကြာပါပြီ သယ်ရင်းတို့လဲ လိုချင်ကြမယ်လိ...
Win RAR ဖိုင်ဖြည်နည်း
တော်တော်များများက ဖိုင်ဖြေနည်းကို မသိကြဘူး ဖြစ်နေတယ် . အဲ့ဒါကြောင့် ရေးလိုက်တာပါ . လွယ်ပါတယ် . ဖိုင်ဘာ့ကြောင့် အများကြီးခွဲပြီး တင်ရသလဲလု...
ကိုထက်. Powered by Blogger.
window7genius
window xp spy
မြန်မာ Desing fonts
မြန်မာ E.BOOK များ
Adobe Series (7)
Copy Delete (1)
Download လုပ်နည်းများ (9)
fast copy (1)
Fruity Loop Studio (1)
Media Softwares (1)
Run Box (2)
window7genius (2)
window xp spy (2)
ထူးခြားတဲ့ 2011 (1)
မြန်မာ Desing fonts (4)
Gtalk အတွက် Smile Code တွေ
Connection ကျနေစဉ် Gmail Gtalk Error ပြနေရင်
RECYCLE VIRUS အတွက်
Facebook Video Chat ချင်သူများအတွက်
Run အကျိုးရှီပုံနှင့် Command
USB အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ရအောင်
How To Do Mouse Pointer Design
WINDOWS ( 7/XP ) မှာ Desktop Icon and Folder တွေမှ...
Live CD နှင့် CD ပေါ်က Window ကို Run ပြီးသုံးကြည့်...
- Copyright © ဘူကြီး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -